XOG: MD Farmaajo oo damacsan Qorshe halis gelin karta dalka 2021 & Xisbiyada oo ka digay -News and information about Somalia
Home News XOG: MD Farmaajo oo damacsan Qorshe halis gelin karta dalka 2021 &...
Siyaasiyiinta iyo Xisbiyada mucaaradka dalka ayaa ka walaacsan qorshaha madaxweyne Farmaajo uu ku dhaqaaqayo marka uu mudo xilleedkiisa sharciga ah uu dhammaado iyo cabsi ka jira jirta inuu mudo kororsi uu sameeyay.
Dhammaan Madaxda Xisbiyada mucaaradka ayaa ka digay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay mudo kororsi sameyso haddii ay sidaasi dhacdana uu dalka geli doono xaalad khatar ah,sida laga soo xigtay qaar ka mid ah siyaasiyiin caan ah.
Illo xog ogaal ah ayaa inoo sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu damacsan yahay in waqti kordhin ku sameysto xilkiisa labo sano oo cusub.
Maalmo ka hor waxaa so baxayay wararka sheegaya in dowlada Somalia ay damacsantahay labo sano oo kale oo dheraad ah in dowladda Somalia ay ku darsato madaama waqtiga dowlada uu ka haray hal sano oo kaliya.
Xildhibaano kamid ah Baarlamaanka Somalia ayaa sheegay in xukumadda ay wado waqtii kororsi Xildhibaan Mohammed Hassan Idris oo ka mid ah xildhibanada golaha shacabka ee Somalia ayaa bartiisa facebook waxa uu ku qoray maqaal dheer oo uu uga hadlay shaqada guddiga KMG ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka kana tirsan golaha shacabka.
Dhinaca kalana waxa uu sheegay in aysan jirin xili dalku uu ka mudnaa in muddada loo kordhiyo waqtigii uu madaxweynaha ka ahaa Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo dagaalo ay ka socdeen degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir xiligaas oo dalku kala guur ku jiray dowlada fedaraal ahna loo diyaarinayay.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur ayaa ku goodiyay in haddii madaxweyne Farmaajo uu ku dhaqaaqo mudo kordhin ay taasi halis gelin karto nidaamka Dowladnimada iyo xasiloonida dalka.
Previous articleWarbaahinta Madaxa Banaan Oo Loo Diiday Ka Qeyb Galka Kulamada Golaha Shacabka
Next articleWasiir Jamaal Oo Xafiis Ka Shaqeeya Adeega Bulshada Ka Furay Degmada Dhahar Oo Ah Deegaan Doorashadiisa